Faravohitra : faritra mena amin’ny asan-jiolahy | NewsMada
Faravohitra : faritra mena amin’ny asan-jiolahy
Par Taratra sur 10/03/2016
Tsy misy miraharaha ! Velon-taraina ny mponina eny Faravohitra sy ny manodidina fa mirongatra ny asan-jiolahy tato ho ato. Mandry andriran’antsy hatrany ny mponina na andro na alina. Efa voasokajy ho faritra mena amin’ny asan-jiolahy mihitsy eny an-toerana satria tsy misy ny fandraisana andraikitra mivantana ataon’ireo tompon’andraikitra voakasik’izany. Isan’andro, mitondra faisana ny mpianatra, ny mpandeha an-tongotra mandeha irery, ny mpandeha fiara tratran’ny fitohanan’ny fifamoivoizana.
Manjaka tanteraka, araka izany, ny jiolahy ary manao andiany izy ireo rehefa manao ny asa ratsiny. Mitondra sabatra sy antsy lavalela. “Aza mba voany ihany”, hoy ny fitantaran’ny renim-pianakaviana iray efa tratran-dry zalahy. Mitsofoka any an’elakela-trano midina eny Ambohijatovo sy mivoaka any Mangarivotra sy Ankadivato ny lalan’ireo jiolahy rehefa avy manendaka. Ny olona anefa tsy sahy manaraka noho ny tahotra.
Tsiahivina fa vao ny faran’ny herinandro teo no nisy tokantrano iray notafihin’ny jiolahy nirongo fitaovam-piadiana mahery vaika teny an-toerana. Lasan’ireo olon-dratsy tamin’izany ny entana rehetra tao an-trano. Tsy afa-manoatra anefa ny tompon-trano manoloana ny fitaovam-piadiana eny am-pelatanan’ireo olon-dratsy. Kamboty lavitra ny mpitandro filaminana araka izany ny mponina ka miantso vonjy amin’izy ireo mba hijery iny faritra iny fa manao ny ataony ny olon-dratsy.